Muwaadiniinta British-Ka Oo Looga Digay Inay U Socdaalaan Dalal Ay Somaliland Ku Jirto
Boqolaal dhallinyaro Soomaali haysata dhalashadda UK ayaa ka soo dhoofay dalkaasi, si ay uga badbaadaan Dembiyadda Weeraradda Mindiyaha loo adeegsado oo ku soo badanaya gudaha dalkaasi.
Waalidiin badan oo Soomaali ah ayaana maciin baday inay Carruurtooda dib ugu soo celiyaan Somalia iyo dalalka kale ee Bariga Afrika, si aysan u gallaafanin Weeraradda Tooreeyda loo adeegsado ee ay Burcadda Dembiilayaasha ah ka geystaan dalka Britain, gaar ahaan magaalladda London.
Warbixin ay soo saartay Hay’adda The Rise Projects ee la shaqeysa Dhallinyaro Somali-British ku nool Waqooyiga London waxaa lagu sheegay in 100 qof lagu dilay weeraro Tooreey oo ka dhacay gudaha UK sannadkan oo keliya, iyadoo dadka la dilay ay 8% ahaayeen Dhallinyaro asal ahaan ka soo jeeda Somalia.
Hay’adda waxay soo bandhigtay Wareysiyo ay la yeesheen Dhallinyaro Soomaali badankooda ku dhashay ama ku koray dalka UK, kuwaasi oo ay Waalidiintooda u dhoofiyeen Somalia iyo Kenya, si ay uga badbaadaan burcadda geysata weeraradda loo adeegsado Tooreeyda.
Waalidiinta carruurtooda u soo dhoofiyey Somalia ayaa sheegay inaysan Tallaabadaasi u arkin xal muddo dheer ah, qaar ka mid ah Dhallinyarada ayaa ku sugan Afrika, halka kuwa kalena ay dib ugu laabteen UK.
Hooyo Aamina oo ka mid ah Waalidiinta wareysiga lala yeeshay ayaa sheegtay inay wiilkeeda oo 15-jir ah u dhoofisay Somaliland, kadib, markii ay ka walaacday saaxiibadda cusub ee uu ku dhex milmay.
Waxay intaasi ku dartay inuu muddo 17 maalmood ah joogay Somaliland, balse ay dib ugu soo celisay UK bishii November ee sannadkii 2018-dii, iyadoo isla markiiba 4 jeer Tooreey looga dhuftay Kilyaha, Beerka iyo Kaadi-haysta, isla markaana ay soo gaareen dhawaacyo dhibaato abidi ku ah noloshiisa.
Dhinaca kale, Xafiiska Arrimaha Dibedda iyo Barwaaqo-sooranka ee dalka Britain (FCO) waxay kula taliyeen Muwaadiniintooda inaysan u socdaalin dalka Somalia oo ay ku jirto Somaliland.
Hadal-qoraal oo ka soo baxay Xafiiska Arrimaha Dibedda iyo Barwaaqo-sooranka ee dalka Britain waxa lagu muujiyey inay sii kordhayso cabsida Argagixisadda iyo Afduubka ee lagala kulmi karo guud ahaan dalka Kenya.